रोगहरु - Noti बिरालाहरू | नोटी बिरालाहरू (पृष्ठ २)
कोरोनाभाइरस र बिरालाहरू: के तिनीहरूले तपाईंलाई रोग सार्न सक्छन्?
के बिरालाहरूले कोरोनाभाइरस सार्न सक्छ? के तपाईले सकारात्मक परीक्षण गर्नुभयो र तपाईको फ्युरी सम्बन्धी के उपायहरू लिने बारे जान्न चाहानुहुन्छ? इन्टर गर्नुहोस् र हामी सबै कुरा वर्णन गर्नेछौं।
किन मेरो बिरालाले विद्यार्थीहरू फैलाएको छ
के तपाईं मेरो बिरालाले विद्यार्थीहरू फैलिएको भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ? प्रविष्ट गर्नुहोस् र हामी तपाईंलाई बताउँछौं कि सम्भावित कारणहरू के हुन् र तपाईंलाई मद्दत गर्नको लागि तपाईंले के गर्नुपर्छ।
बिरालाहरुमा पेट दर्द: कारण र उपचार
बिरालाहरूले कुनै पनि गुनासोको साथ लामो समयसम्म पीडा र असुविधाको खराब बानी राख्छ। हामी कसरी भन्न सक्छौ यदि तपाईलाई पेट दुख्छ?
मेरो बिरालो पित्त बान्ता, म के गर्ने?
यदि तपाईंको बिरालाले पित्त बान्ता भयो र तपाईंलाई यसको कारण थाहा छैन भने, भित्र आउनुहोस् र हामी तपाईंलाई स्वास्थ्य सेवामा यथासक्दो चाँडो गर्न के गर्ने भनेर बताउँछौं। यो नछुटाउ।
के गर्ने यदि बिरालो ओछ्यानमा पेशाब गर्दछ
हामी तपाईंलाई के गर्छौं यदि बिरालोले ओछ्यानमा पेसा बनायो भने: सम्भावित कारणहरू र यसका साथै हामी तपाईंलाई यसलाई रोक्न केही सुझावहरू दिन्छौं।
किन मेरो बिरालो पर्खालको बिरूद्ध उनको टाउको झुकाउँछ
किन मेरो बिरालोले आफ्नो टाउको भित्तामा झुकाउँछ? यदि तपाईंले तपाईंको रीसाइमा यो व्यवहार अवलोकन गर्नुभयो भने, आउनुहोस् र हामी तपाईंलाई के गर्ने भनेर बताउँछौं।
के तपाईको फ्युरी कुकुरले प्राय: दिसा गर्न थालेको छ र तपाई उसको स्वास्थ्यको बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ? एउटा सानो बिरालामा पखाला कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर जान्न प्रविष्ट गर्नुहोस्।
जब किडनी विफलता संग एक बिरालो euthanize जब
मिर्गौला विफलता संग एक बिरालो euthanize जब? यदि तपाईंको फ्यूर अस्वस्थ छ भने, भित्र आउनुहोस् र हामी तपाईंलाई प्रश्न हल गर्न मद्दत गर्ने प्रयास गर्नेछौं।
फिलाइन क्रोनिक जीन्जिंगोस्टोमाइटिस के हो?
के तपाईंको बिरालोले च्युइँदा पीडा महसुस गर्दछ? इन्टर गर्नुहोस् र हामी तपाइँलाई बताउँदछ कि बिचको पुरानो gingivostomatitis के हो, एक रोग जुन तपाइँलाई गम्भीर रूपमा प्रभाव पार्न सक्छ।
बिरालाहरुमा ल्युकोपेनिया का कारणहरु के के हुन्?
बिरालाहरुमा ल्युकोपेनियाका कारणहरू के हुन् भनेर जान्न प्रविष्ट गर्नुहोस् र तपाइँको रक्षा प्रणाली सुदृढ पार्न तपाइँ के गर्न सक्नुहुन्छ।
किन मेरो बिराला रगतको साथ शौच गर्दछ
के तपाईं मेरो बिराला रगतले दिसा गर्छ भनेर आश्चर्यचकित हुनुहुन्छ? प्रविष्ट गर्नुहोस् र हामी तपाईंलाई बताउँछौं कि सम्भावित कारणहरू के हो र कहिले पशु चिकित्सकमा जान्छ।
हाम्रो बिरालोमा ग्लुकोजको स्तर
बिरालाहरूमा सामान्य ग्लूकोजको स्तर के हो पत्ता लगाउनुहोस्, र कसरी तपाईं तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ ताकि समस्याहरू उत्पन्न नहोस्।
Flines दाद: लक्षण र उपचार
बिचको दाँत वा डर्माटोफिटोसिस एउटा गम्भीर र अत्यधिक संक्रामक रोगको नाम हो जुन बिरालाहरूले गर्न सक्ने छ। यसको कसरी उपचार र रोकथाम गरिन्छ पत्ता लगाउनुहोस्।
किन मेरो बिरालो म्याऊ छैन
के तपाईंको बिरालोले उसको आवाज हरायो? भित्र आउनुहोस् र पत्ता लगाउनुहोस् किन मेरो बिरालो आउँदैन। धेरै जसो केसहरूमा यो कुनै गम्भीर कुरा हुँदैन, तर तपाईंले यसलाई हेर्नुपर्दछ।
सेतो नाक संग बिरालाहरु मा क्यान्सर
सेतो नाक भएको बिरालाहरूमा क्यान्सर सबैभन्दा सामान्य र फ्ल्यानलाई प्रभाव पार्ने घातक घातक हो। यसलाई कसरी रोक्ने भनेर फेला पार्नुहोस्!
बिरालाहरूमा आन्द्रा कीटा, तिनीहरूलाई कसरी हटाउने?
के तपाईंको बिरालोमा चिमटाहरू छन्? ठिक छ, पत्ता लगाउन को लागी प्रविष्ट गर्नुहोस् जुन प्राय जसो बारम्बार प्रकारहरू हुन्छन् र तपाई तिनीहरूलाई हटाउन सबै गर्न सक्नुहुन्छ।
बिरालोको चम्केका आँखाहरू कसरी धुने
सानो बिरालाको बच्चाका लागि तिनीहरूको आँखा चम्काउन यो धेरै सामान्य छ, त्यसैले तिनीहरू धुनुपर्नेछ किनकि तिनीहरू लाग्सी र स्रावहरू जम्मा गर्छन्।
बिरालाहरुमा फोलिक्युलर कन्जाक्टिवाइटिसको उपचार कसरी गर्ने?
के तपाईंको बिरालोको आँखाको कुनै भाग धेरै रातो छ? तपाईको फोलिकुलर कन्जाक्टिवाइटिस छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन प्रविष्ट गर्नुहोस्, एक यस्तो रोग जुन निको भैरहेको छ र रोकथाम पनि गर्न सकिन्छ।
मेरो बिरालामा चाउहरू छन्, के गलत छ?
मेरो बिरालामा किन खरोंचहरू छन् भनेर पत्ता लगाउन प्रविष्ट गर्नुहोस्, घाउहरू सामान्य लाग्न सक्छ तर त्यसले हामीलाई अप्रिय आश्चर्य ल्याउन सक्छ।
बिरालाहरुमा IVF को लक्षण र उपचार
बिरालाहरुमा IVF को बारेमा सबै पत्ता लगाउनुहोस्, एक धेरै खतरनाक रोग जुन हाम्रो फरी कुकुरहरुबाट पीडित हुन सक्छ। यो नछुटाउ।
अन्त्य-चरण रेनल असफलताको साथ बिरालोलाई कसरी मद्दत गर्ने?
प्रविष्ट गर्नुहोस् र हामी तपाईंलाई अन्त-चरणमा बिरालाहरूमा मिर्गौला विफलताको बारेमा सबै बताउँछौं। लक्षणहरू र हेरचाह के के हो भनेर थाहा पाउनुहोस् ताकि ती राम्रा छन्।
बिलिन ल्युकेमियाको बारेमा सबै
बिरुवाले ग्रस्त हुने बिरामी रोगबाट ग्रसित रोगको रोग हो। प्रविष्ट गर्नुहोस् र पत्ता लगाउनुहोस् के लक्षणहरू हुन् र तपाईंले तिनीहरूलाई रोक्न के गर्नुपर्दछ।
Flines Calicivirus: लक्षण र उपचार
बिरूवा क्यालिसिभिरस एक धेरै सामान्य र खतरनाक रोग हो जुन हाम्रो फ्युरी साथीहरूले भोग्न सक्छन्। प्रविष्ट गर्नुहोस् र हामी तपाईंलाई यसको बारेमा सबै बताउनेछौं।
मृगौली असफलताको साथ बिरालाहरूको आयु प्रत्याशा के हो?
किडनी विफलताका साथ बिरालाहरूको आयु प्रत्याशा के हो पत्ता लगाउन प्रविष्ट गर्नुहोस्, र यो लामो वा छोटोमा निर्भर गर्दछ।
बिल्लीको कोरोनाभाइरस को लक्षण र उपचार के हो?
बिरूवा कोरोनाभाइरस एक धेरै साधारण रोग हो जुन समयमै उपचार नगिएमा घातक हुन सक्छ। प्रविष्ट गर्नुहोस् र पत्ता लगाउनुहोस् कि कसरी तपाईंको बिरालोलाई यसबाट ग्रस्त हुनबाट रोक्न सकिन्छ।
के बिरालोलाई आँखा तान्न सकिन्छ?
तपाईंसँग क्रस-आँखाको बिरालो छ? सम्भावित कारणहरू र उनीहरूको उपचार प्रविष्ट गर्नुहोस् र पत्ता लगाउनुहोस्, किनकि यस्तो हुन सक्छ कि तपाईंलाई पुन: सुधारको लागि मद्दत चाहिन्छ।
किन मेरो बिरालाले रगत पिसाब गर्छ
के तपाईं मेरो बिरालोले रगत पिसाब गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ? यदि हो भने, प्रविष्ट गर्न नहिचकिचाउनुहोस् र हामी तपाईंको प्रश्नको उत्तर दिनेछौं। यो नछुटाउ।
बिरालोहरूमा फ्याटेर कलेजो के हो र यसको उपचार के हो?
बिरालाहरूको बोसो कलेजो एकदम खतरनाक रोग हो। प्रविष्ट गर्नुहोस् र हामी तपाईंलाई लक्षणहरू के हो र के गर्ने भनेर बताउँदछौं ताकि उनीहरू सकेसम्म चाँडो निको हुन्छन्।
तिनीहरू के हुन् र कसरी मेरो बिरालोलाई ascarids बाट जोगाउने?
के तपाईंलाई थाहा छ बिरालाहरूमा एस्कारिडहरू धेरै सामान्य आंत्र परजीवीहरू हुन्? प्रविष्ट गर्नुहोस् र हामी तपाईंलाई उनीहरूको लक्षणहरू के हुन् र तिनीहरूलाई कसरी हटाइन्छ बताउँछौं।
कारण र बिराला मूत्र क्रिस्टल को उपचार
बिराला मूत्र क्रिस्टलको बारेमा सबै पत्ता लगाउनुहोस्: कारणहरू, लक्षणहरू र उपचार। सबै भन्दा बढि सामान्य बिखारी स्वास्थ्य समस्याहरूको बारेमा जान्नुहोस्।
लिम्फोमा भएको बिरालाहरूको आयु प्रत्याशा के हो?
प्रविष्ट गर्नुहोस् र पत्ता लगाउनुहोस् बिरालोहरूको आयु प्रत्याशा के हो, लिम्फोमा खान्दै, यो रोग जुन घातक हुन सक्छ यदि समयमै उपचार गरेन भने।
बिरालाहरूको क्लेमाइडियालाई कसरी उपचार गरिन्छ?
बिरालाहरूमा क्लैमिडियाका लक्षणहरू र उपचार के हुन्, फेरी बिरालाहरूबीच प्रसारणको उच्च जोखिम भएको एक रोग पत्ता लगाउनुहोस्।
बिरालाहरूमा फाइब्रोसारकोमाका लक्षणहरू र उपचार के हुन्?
के तपाईंलाई थाहा छ बिरालाहरुमा फाइब्रोसारकोमा एउटा यस्तो रोग हो जुन यदि उपचार नगरिएमा, त्यसले मृत्यु निम्त्याउँछ। यसलाई कसरी टाढा राख्ने जान्न प्रविष्ट गर्नुहोस्।
बिरालाहरूमा आन्द्रा परजीवीहरू कसरी हटाउने?
बिरालाहरूको आन्द्रा परजीवीहरू धेरै सामान्य छन्। यदि तपाइँ लक्षणहरू के हो र तपाइँ तिनीहरूलाई कसरी हटाउन सक्नुहुन्छ भनेर जान्न चाहानुहुन्छ भने, प्रविष्ट गर्नुहोस्।
बिरालाहरूको भाइरल रोगहरू
इन्टर गर्नुहोस् र हामी तपाईंलाई बताउँदछौं बिरालाहरूको सबैभन्दा सामान्य भाइरल रोगहरू, साथै उनीहरूका लक्षणहरू जसले गर्दा तपाईंलाई थाहा हुन्छ कि तपाईंले तिनीहरूलाई पशु चिकित्सकमा कहिले लिनुपर्दछ।
बिरालाहरूमा एक्लेम्पिया गर्भावस्था वा स्तनपानको क्रममा देखा पर्न सक्छ जुन जान्नु पर्दछ। प्रविष्ट गर्नुहोस् र हामी तपाईंलाई लक्षणहरू र उपचार के हो बताउनेछौं।
बिरामी संक्रामक एनीमिया
इन्टर गर्नुहोस् र हामी तपाईंलाई बताउँदछौं कि बिरालाहरूलाई लिन सक्ने एक गम्भीर रोगको लक्षण र उपचार के हो: फिनाले संक्रामक एनीमिया।
बिरालोको छालामा घामको प्रभाव
इन्टर गर्नुहोस् र हामी तपाईलाई भन्छौं घामको बिरालाको छालामा के प्रभाव हुन्छ। किन अत्यधिक जोखिम बेवास्ता गर्नु किन महत्त्वपूर्ण छ भनेर फेला पार्नुहोस्।
बिरालामा टेपवर्म सबैभन्दा आम परजीवी रोगहरू मध्ये एक हो। प्रविष्ट गर्नुहोस् र हामी तपाईंलाई लक्षणहरू के हुन् र यो कसरी व्यवहार गरिन्छ भनेर बताउनेछौं।
बिरालाहरुमा मूत्र संक्रमणबाट कसरी बच्ने
प्रविष्ट गर्नुहोस् र हामी तपाइँलाई बिरालाहरूमा मूत्र संक्रमणबाट कसरी बच्ने भनेर बताउनेछौं। तपाइँको फ्यारीलाई स्वस्थ राख्न के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर पत्ता लगाउनुहोस्।
कसरी बिरालोलाई मुटुको समस्या छ भने कसरी जान्ने
इन्टर गर्नुहोस् र हामी तपाइँलाई कसरी जान्ने कि कसरी बिरालोलाई मुटुको समस्या छ। लक्षणहरू के हो र उसलाई मद्दत गर्न के गर्ने पत्ता लगाउनुहोस्।
बिरालाहरूमा रहेको एलोपेसिया एक समस्या हो जुन कुनै पनि बिरूद्दलाई असर गर्न सक्छ। प्रविष्ट गर्नुहोस् र हामी तपाईंलाई बताउनेछौं लक्षणहरू र कारणहरू के के हुन् तपाईंलाई तपाईं कसरी उसलाई सहयोग गर्ने थाहा छ।
के गर्ने यदि बिरालाले नाकबाट रगत बग्यो?
के गर्ने यदि बिरालाले नाकबाट रगत बग्यो? यदि तपाईंको प्यारोले यो गर्न सुरू गर्यो भने, भित्र आउनुहोस् र हामी तपाईंलाई किन यो भएको हुन सक्छ र तपाईं उसलाई कसरी मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ बताउनेछौं।
बिरालाहरूमा भेस्टिबुलर सिंड्रोम
इन्टर गर्नुहोस् र हामी तपाईंलाई बताउँदछौं बिरालाहरूमा भएको वेस्टिबुलर सिन्ड्रोम के हो र कसरी यसलाई व्यवहार गरिन्छ, यी पशुहरूमा एक सामान्य सामान्य न्यूरोलजिकल डिसअर्डर।
बिचको इम्युनोडेफिशियन्सी भाइरसका कारणहरू
इन्टर गर्नुहोस् र हामी तपाइँलाई बताउँदछौं बिचको इम्युनोडेफिशियन्सीका कारणहरू, यसको लक्षणहरू र यसको उपचार जसले गर्दा तपाईलाई थाहा छ कि तपाइँको बिरालो बिरामी छ भने के गर्नु पर्छ।
Flines दमा, एक खतरनाक रोग
Flines दमा एक रोग हो कि यदि उपचार नगरिएमा घातक हुन सक्छ। प्रविष्ट गर्नुहोस् र पत्ता लगाउनुहोस् के लक्षणहरू र उनीहरूको उपचार के हो।
बिरालाहरूमा छाला ट्यूमर
इन्टर गर्नुहोस् र हामी तपाईंलाई बताउँदछौं कि बिरालाहरूमा प्राय जसो छाला ट्यूमर हुन्छ र तपाईंले तिनीहरूलाई किन चाँडो चाँडो पशु चिकित्सकमा लैजानु पर्छ।
ल्युकेमियाको साथ बिरालाहरूको लागि एलोवेरा
ल्युकेमिया भएको बिरालाहरूका लागि एलोवेरा कत्तिको उपयोगी छ? यदि तपाईंको प्यारो व्यक्तिहरू यस रोगबाट ग्रस्त छन् र तपाईं तिनीहरूको जीवनको गुणस्तर सुधार गर्न चाहनुहुन्छ भने, प्रविष्ट गर्नुहोस्।
सामान्य बिराला कानका रोगहरू
प्रविष्ट गर्नुहोस् र पत्ता लगाउनुहोस् बिरालाहरूको कानमा सामान्य रोगहरू के हुन् र तपाईंले उनीहरूको उपचार गर्न के गर्नुपर्दछ र तिनीहरूलाई निको पार्नुहोस्।
बिरालाहरूको शरीरको गन्ध
स्वस्थ बिरालाहरूको शरीरको गन्ध मानव नाकहरूको लागि अव्यवहार्य हो, तर किन तिनीहरू कहिलेकाँही दुर्गन्धित हुन्छन्? प्रविष्ट गर्नुहोस् र हामी तपाईंलाई उनीहरूलाई कसरी मद्दत गर्ने भनेर पनि बताउँछौं।
हामी तपाईंलाई बिरालाहरूमा असंयमितताको बारेमा सबै कुरा भन्छौं: यसको कारणहरू, यसको उपचार र अधिक। प्रविष्ट गर्नुहोस् र पत्ता लगाउनुहोस् कि कसरी यी जनावरहरूलाई राम्रो बनाउन मद्दत गर्ने।
बिरालाहरूमा जन्मजात रोगहरू
बिरालामा जन्मजात रोगहरू के हुन् भनेर हामी तपाईंलाई बताउँछौं जसले गर्दा तपाईंलाई थाहा हुन्छ कि कुनले तपाईंको फ्युरीलाई असर गर्न सक्छ र यदि उनीहरू कुनै किसिमबाट पीडित छन् भने कसरी प्रतिक्रिया गर्ने भनेर।
मेरो बिरालाको खुजली छ, म उसलाई कसरी मद्दत गर्न सक्छु?
के तपाईं मेरो बिरालामा नचलाउनु भएको र उसलाई कसरी मद्दत गर्ने भनेर सोचिरहनुभएको छ? प्रविष्ट गर्नुहोस् र हामी तपाईंलाई यो अनौंठो र खतरनाक रोगको बारेमा सबै कुरा बताउनेछौं।
बिरालाहरुमा स्पिना बिफिडा
बिरालाहरूमा स्पाइना बिफिडा एक जन्मजात विकृति हो जसले धेरै गतिशीलता समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ। भित्र आउनुहोस् र हामी तपाईंलाई यसको बारेमा सबै बताउनेछौं।
मेरो बिरालो हिडिरहेको बेला staggers, म यो कसरी मद्दत गर्न सक्छ?
यदि मेरो बिरालो हिंड्दा डगमगायो भने, म उसलाई कसरी मद्दत गर्न सक्छु? यदि तपाईं जवाफ जान्न चाहानुहुन्छ भने, प्रविष्ट गर्नुहोस् र हामी तपाईंलाई तपाईंलाई यस विषयको बारेमा जान्न आवश्यक पर्ने सबै कुरा बताउनेछौं।
बिरालाहरुमा पल्मोनरी उच्च रक्तचाप
हामी तपाईंलाई बिरालाहरूमा पल्मोनरी उच्च रक्तचापको बारेमा बताउँछौं, एउटा अत्यन्त गम्भीर रोग जुन हाम्रो फ्यारा बिरालाहरूको राम्रोको लागि जान्नुपर्दछ।
कसरी थाहा पाउने कि मेरो बिरालाको पेट दुखाई छ भने
म कसरी जान्दछु यदि मेरो बिरालामा पेट दुखाई छ? प्रविष्ट गर्नुहोस् र हामी तपाईंलाई जति सक्दो चाँडो सुधार गर्नको लागि के गर्न सक्छौं बताउँछौं।
बिरालाहरूमा रक्ताल्पता को प्रकार
हामी तपाईंलाई बिरालाहरूमा एनीमियाका बिभिन्न प्रकारहरूको, साथै यस रोगको लक्षण र उपचारको बारेमा बताउँछौं।
बिरालाहरूमा एक्रल चाट्ने ग्रान्युलोमा
बिरालाहरुमा Acral Lick Granuloma के हो? यदि तपाइँ लक्षणहरू र उपचार के हो भनेर जान्न चाहानुहुन्छ भने भित्र जानुहोस् र पत्ता लगाउनुहोस्।
प्रविष्ट गर्नुहोस् र बिरालाहरूमा मास्टिटिसको लक्षण र उपचार पत्ता लगाउनुहोस्, एक समस्या जसले तिनीहरूलाई गर्भावस्था पछि असर गर्न सक्छ।
बिरालामा कोलाइटिस एक रोग हो जसले तिनीहरूलाई ठूलो असुविधा उत्पन्न गर्दछ। प्रविष्ट गर्नुहोस् र हामी तपाईंलाई तपाईंलाई थाहा पाउनुपर्ने सबै कुरा बताउँदछौं ताकि ती सकेसम्म चाँडो सुधार हुनेछ।
के गर्ने यदि बिरालाले पेशाब गर्न सक्दैन
के गर्ने यदि बिरालाले पिसाब गर्न सक्दैन? यदि तपाईंको फर्रीमा खाली स्थानमा समस्या छ भने भित्र आउनुहोस् र हामी तपाईंलाई बताउनेछौं कि तपाईंले के सुधार गर्नुपर्नेछ।
बिरालामा फेरेन्जाइटिस एक रोग हो जुन सजीलै उपचार गर्न सकिन्छ र यसलाई रोक्न पनि सजिलो छ। भित्र आउनुहोस् र हामी तपाईंलाई यसको बारेमा सबै बताउनेछौं।
मेरो बिरालाले सास फेर्न गर्दा किन आवाज निकाल्दछ?
मेरो बिरालाले सास फेर्न गर्दा किन आवाज निकाल्दछ? यदि तपाईं पनि उसलाई कसरी मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने जान्न चाहानुहुन्छ भने, आउनुहोस् हामी तपाईंलाई के गर्नेौं बताउनेछौं।
बिरालाहरुमा Giardiasis एक परजीवी रोग हो जुन गम्भीर र संक्रामक छ। यदि समयमै उपचार गरेन भने यो घातक हुन सक्छ। उनको बारे सबै कुरा जान्न प्रविष्ट गर्नुहोस्।
के गर्ने यदि मेरो बिरालोले छालामा जलेको छाला छ
यदि तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोचिरहनु भएको छ यदि मेरो बिरालोले छालामा चिडिएको छ भने, नहिचकिचाउनुहोस्: भित्र आउनुहोस् र हामी तपाईंलाई केही सुझावहरू दिनेछौं जुन तपाईंलाई मद्दत गर्न धेरै उपयोगी छ।
बिरालाहरूमा पेरियानल फिस्टुला
बिरालाहरूमा पेरियानल फिस्टुला धेरै साधारण हुँदैन, तर यसले उनीहरूलाई धेरै असुविधा र पीडा दिन्छ। इन्टर गर्नुहोस् र हामी तपाईंलाई बताउनेछौं कि के सुधार गर्नुपर्दछ तपाईंले के उपायहरू लिनुपर्दछ।
बिरालाहरूमा मिर्गौला रोगका लक्षणहरू के-के हुन्?
बिरालामा मिर्गौला रोगका लक्षणहरू के हुन् भनेर हामी तपाईंलाई बताउँछौं, र कसरी तपाईं आफ्नो साथीलाई सामान्य जीवन बिताउन जारी राख्न सक्नुहुन्छ।
किन बिरालाहरू मा प्वालहरू देखिन्छन्?
बिरालाका प्वालहरू प्रायः बारम्बार हुँदैन, तर ती पीडादायी हुन्छन्। प्रविष्ट गर्नुहोस् र पत्ता लगाउनुहोस् कि कसरी समस्या समाधान गर्ने ताकि तपाईंको फ्युरीले सामान्य जीवन बिताउन सक्दछ।
बिरालाहरुमा साल्मोनेलोसिसको बारेमा सबै
बिरालाहरूमा साल्मोनेलोसिस एक ब्याक्टेरियाको रोग हो जसले पनी बिरालाहरूलाई धेरै समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ। प्रविष्ट गर्नुहोस् र हामी तपाईंलाई लक्षणहरू र उपचार के हो बताउनेछौं।
बिरालाहरुमा डिहाईड्रेसनको बारेमा सबै
हामी तपाईंलाई बिरालाहरूमा डिहाईड्रेसनको बारेमा सबै कुरा बताउँछौं: लक्षणहरू, उपचार र अन्य धेरै। भित्र आउनुहोस् र के गर्ने पत्ता लगाउनुहोस् यदि तपाईंलाई शंका लाग्छ कि तपाईंको फ्युरी कुकुरहरूले पर्याप्त पानी पिउँदैनन्।
बिरालाहरुमा Leishmaniasis, एक खतरनाक र अज्ञात रोग
बिरालाहरुमा लिस्मानियासिस एक धेरै कम ज्ञात रोग हो। यसलाई अलि बढी बनाउनको लागि हामी यो के हो र लक्षणहरू के हो वर्णन गर्दछौं।
बिरालाहरूमा कसरी चिसो काट्ने एलर्जी पत्ता लगाउने?
बिरालाहरूमा पिस्सू काट्ने एलर्जीको लक्षण र उपचार के हो? यदि तपाईलाई शंका छ कि तपाईको रौंमा यो छ, आऊ र हामी उसलाई तपाईलाई कसरी मद्दत गर्ने बताउछौं।
बिरालाहरुमा गठियाको बारेमा सबै
बिरालाहरूमा जोर्नीशोथ एक रोग हो जसले तिनीहरूलाई धेरै पीडा र असुविधाको कारण दिन्छ। यसलाई कसरी पत्ता लगाउने पत्ता लगाउनुहोस् र तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ ताकि उनीहरूसँग जीवनको राम्रो गुणस्तर हुन सक्छ।
बिरालामा कोलाइटिस कसरी पत्ता लगाउने?
हामी बिरालामा कोलाइटिस कसरी पत्ता लगाउने भनेर वर्णन गर्दछौं ताकि तपाईंलाई लक्षणहरू र तिनीहरूको उपचार के हो भनेर पनि थाहा पाउनुहुनेछ। यो नछुटाउ।
बिरालामा ओटिटिसको बारेमा तपाईलाई जान्नुपर्ने सबै कुरा
हामी तपाईंलाई बिरालामा ओटिटिसको बारेमा जान्नुपर्ने सबै कुरा बताउँदछौं, एक धेरै साधारण रोग जुन उनीहरूलाई ठूलो असुविधाको कारण गर्दछ। प्रविष्ट गर्नुहोस् र फेरी पत्ता लगाउनुहोस् कि यदि तपाईंको फियरमा यो छ र तपाईं उसलाई मद्दत गर्न के गर्न सक्नुहुन्छ।
बिरालाहरुमा Gingivitis को लक्षण र उपचार के हो?
हामी तपाईलाई बिरालाहरुमा Gingivitis को बारेमा बताउँछौं, यी जनावरहरुमा सबैभन्दा आम मौखिक रोग मध्ये एक हो। प्रवेश गर्दछ।
बिरालाको दन्त रोग के हो?
बिरालाको दन्त रोग के हो? यदि तपाईले जान्न चाहानुहुन्छ कि कुन व्यक्तिले यी फ्युरीलाई सबैभन्दा बढी असर गर्दछ भने, संकोच नगर्नुहोस्: प्रविष्ट गर्नुहोस्।
बिरालाहरुमा PIF, एक जीवन जोखिमजनक रोग
बिरालाहरूमा एफआईपी, वा फ्लाइन संक्रामक पेरिटोनिटिस, एक बिमारी हो जसले बिखारेको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई असर गर्छ। समयमै उपचार नगरेसम्म यो जीवन नै जोखिमपूर्ण छ। प्रविष्ट गर्नुहोस् र हामी तपाईंलाई PIF को बारेमा सबै कुरा बताउँछौं।
बिरालाहरुमा हाइपरथायरायडिजमको लक्षण र उपचार के हो?
के तपाईंको प्यारो वजन घटाउँदै सामान्य भन्दा बढि खाना खादै छ? यदि हो भने, आउनुहोस् र हामी तपाईंलाई सबै बिरालाहरूमा हाइपरथायरायडिजमको बारेमा बताउनेछौं।
बिरालोमा अग्नाशयशोथका लक्षणहरू र उपचार के हुन्?
बिरालोमा पन्क्रियाटाइटिस के हो पत्ता लगाउनुहोस्: कसरी पनी निदान हुन्छ, लक्षण के हो र के गर्नु आवश्यक छ ताकि उनीहरू सकेसम्म चाँडो सुधार गर्न सक्दछन्।
बिरालामा स्ट्र्याबिस्मसको उपचार के हो?
बिरालाहरूमा स्ट्र्याबिस्मस विसंगति हो जुन कुनै पनि जात वा क्रसलाई असर गर्न सक्छ। प्रविष्ट गर्नुहोस् र पत्ता लगाउनुहोस् के कारणहरू र उपचारहरू हुन्।
बिरालामा युभिटिस के हो र कसरी उपचार गरिन्छ?
बिरालाहरूमा पर्ने युभिटिस एक आँखा रोग हो जुन धेरै गम्भीर हुन सक्छ। यो के हो पत्ता लगाउन प्रविष्ट गर्नुहोस्, लक्षण के हो र कसरी यसको उपचार गरिन्छ।
निश्चित हुनुहुन्न कि यदि तपाईको बिरालोमा सुगन्धित आँखा छ भने के गर्ने? सब भन्दा साधारण कारणहरू के हो पत्ता लगाउन प्रविष्ट गर्नुहोस् र कसरी तपाईं तिनीहरूलाई अन्त्य गर्न कदम चाल्नु पर्छ।
वयस्क बिरालाहरूमा दमको उपचार के हो?
वयस्क बिरालाहरूमा दमको उपचार के हो? यदि तपाईंको प्यारो साथीलाई यो रोग पत्ता लागेको छ भने, आउनुहोस् र हामी तपाईंलाई यसको उपचार गर्ने तरिका बताउँछौं।
म के गर्ने यदि मेरो बिरालो जताततै urinates
यदि मेरो बिरालोले जताततै पेशाब गर्छ भने म के गर्ने? यदि तपाईंको प्यारीले आफैलाई राहत दिन शुरू गरेको छ जहाँ ऊ नहुनु पर्छ, भित्र आउनुहोस् र हामी तपाईलाई समस्याको समाधान गर्न के गर्ने बताउँछौं।
कसरी जान्ने यदि मेरो बिरालामा मोतियाबिन्दु छ
म कसरी जान्दछु यदि मेरो बिरालामा मोतिबिन्दु छ? यदि तपाईंलाई शंका लाग्छ कि तपाईंको साथीलाई यो समस्या छ भने भित्र आउनुहोस् र हामी तपाईंलाई के गर्ने भनेर बताउँछौं ताकि उसले सामान्य रूपमा फेरि देख्न सकून्।
टिकबाट संक्रमित बिरामीहरू के के हुन्?
टिकबाट संक्रमित रोगहरूको बारेमा जान्नुहोस् र किन तपाईंको बिरालालाई यी कष्टकर परजीवीहरूबाट जोगाउनु महत्त्वपूर्ण छ।
किन बिरालाहरु भएका मानिसहरु बढी खुशी छन्?
के तपाई जान्न चाहानुहुन्छ किन बिरालाहरु संग मानिसहरु खुशी छन्? नहिचकिचाउनुहोस्: प्रविष्ट गर्नुहोस् र हामी तपाईंको शंकाहरूको समाधान गर्नेछौं। यो नछुटाउ।
बिरालामा मेलानोमाको लक्षण के हो र के हो?
बिरालाहरूमा मेलानोमा एक कार्सिनोजेनिक रोग हो जसले यी जनावरहरूको छाला र आँखालाई असर गर्छ। प्रविष्ट गर्नुहोस् र हामी तपाईंलाई लक्षणहरू र उनीहरूको उपचार के हो, र यसको रोकथाम गर्ने उपायहरू पनि दिन्छौं।
बिरालाहरूमा श्वासप्रश्वासको कार्सिनोमाको लक्षण र उपचार
हामी तपाईंलाई बिरालाहरूमा श्वासप्रश्वासको कार्सिनोमाका लक्षणहरू र उपचारको बारेमा बताउँछौं, एक प्रकारको क्यान्सर जुन समयमै उपचार नगिएमा घातक हुन सक्छ।
फ्लाईस पारेको रोग के हो?
फ्लाईस पारेको रोग के हो? यदि तपाई जान्न चाहानुहुन्छ किन बिरालालाई यी परजीवीहरूबाट जोगाउनु महत्वपूर्ण छ भने, प्रविष्ट गर्नुहोस्।
बिरालाहरूमा पेट फुलेको छ
के तपाईको बिरालोमा सुन्निएको पेट छ? लक्षणहरू पत्ता लगाउनुहोस् जुन बिरालोको पेटमा फुलेको हुन सक्छ, यसलाई पशु चिकित्सा ध्यान आवश्यक पर्दछ। यदि तपाइँको घरपालुवा जनावरको फुलेको पेट छ भने, भित्र जानुहोस् र के गलत छ भनेर पत्ता लगाउनुहोस्।
मेरो बिरालोलाई विष लागेको छ, म के गर्ने?
तपाईंलाई विषाक्त गरिएको छ र यस पशुलाई मृत्यु गराउन सक्ने यस अवस्थालाई रोक्नको लागि सुझावहरू अनुसरण गर्नका लागि चरणहरू थाहा पाउनुहोस्। त्यहाँ के गर्ने छ?
किन मेरो बिरालोले वजन कम गर्छ?
के तपाई आफ्नो फ्यारीको बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ? यदि तपाईं सोचिरहनु भएको छ कि किन मेरो बिरालोले वजन घटाइरहेको छ र तपाईंले यसको कारण पत्ता लगाउन सक्नुहुन्न भने, प्रविष्ट गर्नुहोस् र हामी तपाईंलाई यसलाई पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछौं।
मेरो बिराला भंग छ
यदि तपाईंको बिरालोको खुट्टा भाँचिएको छ वा लme्गडा छ भने के गर्ने? पुरानो मिथक हो कि सबै बिरालाहरू तिनीहरूका खुट्टामा अवतरण गर्छन् सधैं त्यसो हुँदैन, त्यसैले यो हुन सक्छ कि तपाईंको बिखारीले पञ्जा भाँच्दछ।
प्रतिरक्षा बिरालो भनेको के हो?
के तपाईंलाई थाहा छ प्रतिरक्षा बिरालो के हो? हामी तपाईंलाई यो पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछौं र यसको साथै, हामी तपाईंलाई यसै बिरामी एड्स रोगको बारेमा जान्नुपर्ने सबै कुरा बताउँछौं।
बिरालाहरूमा पाचन समस्याहरू
के तपाइँ शंका गर्नुहुन्छ कि तपाइँको फियर ठीक छैन? प्रविष्ट गर्नुहोस् र हामी तपाइँलाई बिरालाहरूमा पाचन समस्याहरू के हुन् र तिनीहरूलाई पुनःप्राप्ति गर्न के गर्ने भनेर हामी तपाइँलाई भन्नेछौं।
बिरालोहरूमा सुस्ती के हो र यसलाई कसरी व्यवहार गरिन्छ?
के तपाईंको प्यारो साथीहरूले आफूले माया गरेको कुरामा रुचि गुमाइरहेका छन्? प्रविष्ट गर्नुहोस् र हामी तपाइँलाई बिरालाहरूको सुस्ती के हो, र तपाइँ तिनीहरूलाई मद्दत गर्न के गर्न सक्नुहुनेछ भनेर हामी तपाइँलाई बताउनेछौं।
बिरालाहरूको लागि प्राथमिक उपचार
बिरालाहरूको लागि प्रत्येक प्राथमिक उपचार किटमा के हुनुपर्दछ भनेर हामी तपाइँलाई भन्छौं। कुनै चीजको साथ तपाइँलाई समात्नबाट दुर्घटनाहरू रोक्नुहोस्।
बिरालाहरुमा मौखिक रोग के हो?
हामी तपाईंलाई बताउँछौं तिनीहरू के हुन् र कसरी बिरालामा मौखिक रोगहरू रोकथाम गरिन्छ ताकि तपाईंको फ्यारीले दैनिक खाना खान सक्दछ।
किन मेरो बिरालो यति धेरै छींक गर्छ
के तपाइँ शंका गर्नुहुन्छ कि तपाइँको फियर ठीक छैन? यदि तपाईं मेरो बिरालाले किन यति धेरै छोंकिन्छ भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने, आउनुहोस् र हामी तपाईंलाई सम्भावित कारणहरू बताउनेछौं।
बिरालोको डेलिभरीमा जटिलताहरू
बिरालाको जन्ममा सम्भावित जटिलताहरू के हुन् भनेर हामी तपाईंलाई बताउँछौं ताकि तपाईं कुनै समस्याको चिह्न पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ।
कसरी जान्ने यदि मेरो बिरालोमा मुटुको समस्या छ
के तपाई आफ्नो फ्यारीको बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ? मेरो बिरालोलाई मुटुको समस्या छ कि छैन भनेर कसरी पत्ता लगाउँनुहोस् र के गर्ने यदि तपाईंसँग श he्का छ भन्ने शंका गर्नुहुन्छ भने।
बिरालाहरुमा Permethrin विषाक्तता
हामी तपाईंलाई बताउँछौं बिरालाहरूमा परमेथ्रिन विषाक्तताले गर्दा हुने लक्षणहरू र क्षतिहरू, र तिनीहरूलाई कसरी रोक्न सकिन्छ।
बिरालाहरुमा सेप्टेसीमिया: यो के हो र यसलाई कसरी व्यवहार गरिन्छ?
सेप्टेसीमिया एक जीवनलाई जोखिममा पार्ने जीवाणु संक्रमण हो। जब यो पशुको आवश्यक ध्यान प्राप्त गर्दैन, बिराला गम्भीर खतरामा छ। प्रवेश गर्दछ।
के बिरालाहरूले जुत्ता पाउँन सक्छन्?
के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ कि यदि बिरालाहरूले जुँहरू भेट्टाउन सक्छन्? हामी शंकालाई हल गर्दछौं र हामी तपाईंलाई बताउँदछौं, थप रूपमा, कसरी तपाईं तिनीहरूलाई तपाईंको भोकबाट हटाउन सक्नुहुन्छ।
किन बिरालोले आफ्नो कपाल बाहिर तान्न
हामी तपाईंलाई भन्छौं किन बिरालाहरूले आफ्ना कपाल तान्छन् र तिनीहरूलाई चाँडो निको हुनको लागि के उपायहरू लिनुपर्दछ। प्रवेश गर्दछ।
खरोंचको साथ बिरालोलाई कसरी हेरचाह गर्ने
के तपाईको फ्यारीलाई यो रोग लागेको छ? यदि हो भने, शान्त रहनुहोस्। इन्टर गर्नुहोस् र हामी तपाईंलाई मन्जेको साथमा बिरालोको ख्याल कसरी राख्ने भनेर बताउँछौं ताकि यो छिट्टै सुधार हुनेछ।
बिरालाहरुमा क्यान्सरका लक्षणहरू के छन्
बिरालाहरूमा क्यान्सरका लक्षणहरूको बारेमा जान्नुहोस्, यी अद्भुत जनावरहरूमा मृत्युको प्रमुख कारणहरू मध्ये एक हो।
बिरालाहरूमा सिस्टिटिसको उपचार कसरी गर्ने
के तपाईंको फ्यारी ट्रेबाट बाहिर छ? यदि हो भने, बिरालाहरूमा सिस्टिटिसको उपचार गर्ने तरिका जान्नको लागि प्रविष्ट गर्नुहोस्, सबैभन्दा खतरनाक मूत्र रोगहरू मध्ये एक।
बिरालाहरूमा लाइम रोगको बारेमा सबै
लाइम रोग एक धेरै खतरनाक हो जुन हाम्रो फ्युरीले गर्न सक्दछ। यसलाई पहिचान गर्न सिक्नुहोस् र यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ जान्नुहोस्।
बिरालाहरूमा जलबिन्दुको लक्षण के छ?
आँखा भित्र तरल पदार्थ जम्मा भएको कारण, यो एक रोग हो कि धेरै गम्भीर हुन सक्छ, तर बिरालाहरु मा जलबिन्दु को लक्षणहरु के हो? प्रवेश गर्दछ।
किन मेरो बिरालाको आँखा रुन्छ
के बिरालाका आँखाले सामान्य भन्दा बढी आँखा स्राव उत्पादन गर्न थालेको छ? यदि त्यसो हो भने, आउनुहोस् र हामी तपाईंलाई मेरो बिरालाको आँखा किन पानी भएको छ भनेर बताउनेछौं।
कसरी जान्ने यदि मेरो बिरालोको घाँटी दुखेको छ
यो एक लक्षण हो जुन धेरैलाई याद गरिदैन। हामी भन्छौं कि कसरी मेरो बिरालालाई घाँटी दुखेको छ र कसरी जान्ने भनेर तपाइँ उसलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ।
बिरालाहरूमा पिस्सू एलर्जी डर्मेटाइटिसको लक्षण र उपचार
बिरालाहरूमा स्निल एलर्जी डर्मेटाइटिसको लक्षण र उपचार के हो पत्ता लगाउनुहोस् र उनीहरूलाई सजिलो सास फेर्न लगाउनुहोस्।
किन मेरो बिरालो हटाइरहेको छैन?
हामी तपाईंलाई बताउँछौं किन मेरी बिरालाले ट्रेमा आफैलाई राहत नदिने, र तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई सामान्य जीवनमा सकेसम्म चाँडो फिर्ता गर्नका लागि।
के गर्ने यदि मेरो बिरालालाई पेटमा दुख्यो भने
के तपाईको फ्यारी राम्रो लाग्दैन? यदि हो भने, आउनुहोस् र हामी तपाईंलाई के गर्नेौं यदि मेरो बिरालालाई पेट दुख्ने छ भने यो सकेसम्म चाँडो निको हुनेछ।
रोग बिरामी बिरालाहरू द्वारा प्रसारित
यदि तपाईं घरबाट सडकबाट फ्रि take लिन चाहानुहुन्छ भने भित्र जानुहोस् र समस्याहरूबाट बच्नको लागि आवारा बिरालाहरू सार्ने रोगहरू पत्ता लगाउनुहोस्।
बिरामी हर्पेस भाइरसको बारेमा सबै
हामी तपाईंलाई फिनल हर्पेस भाइरसको बारेमा सबै कुरा भन्छौं, एक महत्त्वपूर्ण रोगले जुन हाम्रो प्रिय बिरालाहरूलाई असर गर्न सक्छ।
बिरालाहरुमा उदासिनता को कारणहरु
बिरालाहरुमा उदासीनता को कारण के हो? यदि तपाईं यी पशुहरूसँग तपाईंको जीवन साझा गर्नुहुन्छ भने, तिनीहरूलाई अझ राम्रो महसुस गर्न मद्दत गर्न के गर्ने पत्ता लगाउनुहोस्।
हामी तपाईंलाई बिरालाहरूमा खानाको एलर्जीको बारेमा सबै कुरा भन्छौं: लक्षणहरू, के कारण एलर्जी हुन्छ, कसरी तिनीहरूलाई रोक्ने, र अधिक।
बिरालाहरूमा श्वासप्रश्वास समस्याहरू
हामी तपाईंलाई बताउँछौं बिरालाहरूमा श्वासप्रश्वासको समस्या के हो: तिनीहरूको कारणहरू, तिनीहरूको लक्षणहरू र तिनीहरूको उपचार। थप रूपमा, हामी तपाईंलाई तिनीहरूको रोक्न मद्दत गर्दछौं। प्रवेश गर्दछ।
बिरालाहरूमा खोकीको लागि घरेलु उपचार
हामी तपाईंलाई बिरालाहरूमा खोकीको एक श्रृंखलाको घरेलू उपचार प्रदान गर्दछौं, एक लक्षण जुन धेरै रोगहरू प्रस्तुत गर्दछ र त्यो उनीहरूको लागि अत्यन्त कष्टकर छ।
हामी तपाईंलाई बिरालाहरूमा पागल मनोभ्रंशको बारेमा सबै कुरा भन्छौं: लक्षणहरू, उपचार, कसरी उनीहरूको ख्याल राख्ने ताकि उनीहरूको जीवनको गुणस्तर राम्रो होस्, र अझ बढि।
बिरालाहरुमा कसरी ढुसी पत्ता लगाउने?
हामी तपाईंलाई बिरालाहरूमा फ about्गलको बारेमा जान्न आवश्यक पर्ने सबै कुरा बताउँछौं: कसरी तिनीहरू कसरी फैलिन्छन्, लक्षणहरू, उपचार र अधिक, र अधिक।
बिरालाहरुमा फाइलेरियाको बारेमा तपाईलाई जान्नु पर्ने सबै कुरा
हामी तपाईंलाई फाइलेरिया भनेको के हो भन्दछौं, परजीवी जसले फाइलेरियास संचारण गर्दछ, मुटुको रोग, बिरालाले गर्न सक्ने गम्भीर गम्भीर।
बिरालाहरुमा अस्थिरोगको बारेमा तपाईलाई जान्नुपर्ने सबै कुरा
बिरालाहरुमा अस्थिरोग एक धेरै साधारण रोग हो जुन पुरानो रौंका जनावरहरुमा छ। प्रविष्ट गर्नुहोस् र पत्ता लगाउनुहोस् के लक्षणहरू र उपचार के हो।
बिरालाहरूमा डिस्टेम्परको लक्षण के-के हुन्?
हामी तपाईंलाई बताउँछौं बिरालाहरूमा डिसटेम्परका लक्षणहरू के हुन्, र तपाईंले के गर्नुपर्दछ कि तपाईंको फ्युरीहरू चाँडो भन्दा चाँडो निको हुनेछ।
बिचको एक्नेको बारेमा सबै
बिरुवामा हुने एक्ने सबैभन्दा सामान्य छालाका रोगहरू मध्ये एक हो। तपाइँसँग यो कसरी छ जान्ने र कसरी यसलाई व्यवहार गर्ने भनेर फेला पार्नुहोस्।
बिरालाहरूमा दौरा, के गर्ने?
बिरालामा दौरा एक लक्षण हो जुन उनीहरूको हेरचाहकर्ताले चिन्तित गर्दछ। हामी तपाईलाई के भन्छौं तपाईलाई के तपाईलाई भँप्न सहायता गर्नु पर्छ।
बिरालाहरूमा किडनी असफलता
बिरालाहरूमा किडनी असफलताको बारेमा तपाईलाई जान्नुपर्ने सबै कुरा हामी बताउँछौं: लक्षणहरू, उपचार र रोकथाम जसले गर्दा तपाई यसलाई आफ्नो जनावरहरूमा पहिचान गर्न सक्नुहुनेछ।
के बिरालोले रेबीज सार्छ?
रेबीज बिरालालाई असर गर्ने सबैभन्दा खतरनाक रोगहरू मध्ये एक हो। लक्षणहरू जान्न प्रविष्ट गर्नुहोस् र यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ।
यदि मेरो बिरालोले धेरैपटक बान्ता गर्छ भने म के गर्ने?
के तपाइँ श suspect्का गर्नुहुन्छ कि तपाइँको साथीसँग केहि गलत छ? के तपाई सोचिरहनु भएको छ यदि मेरो बिरालोले बान्ता गर्छ भने के गर्ने? यदि हो भने, हिचकिचाउनुहोस् र प्रविष्ट गर्नुहोस्।
एक spayed बिरालो को व्यवहार मा परिवर्तन
त्यहाँ एक spayed बिरालो को व्यवहार परिवर्तन छ? सत्य यो हो कि यो विशेष गरी प्रत्येक बिरालामा निर्भर गर्दछ। Spaying र न्युटरि c बिरालाहरूको बारेमा अधिक जान्न प्रविष्ट गर्नुहोस्: मूल्यहरू, हुलाक र अधिक!
कसरी मेरो बिरालालाई बिरामी हुनबाट रोक्न
कसरी मेरो बिरालालाई बिरामी हुनबाट रोक्न। हामी तपाईको प्रश्नको उत्तर तपाईलाई सल्लाह दिएर दिन्छौं ताकि तपाईको फारीको स्वास्थ्य लामो समय सम्म स्थिर रहनेछ।
के तपाईंमा सुलेको लिम्फ नोडहरू र सामान्य असुविधा छ? यदि हो भने, तपाईं बिरालो स्क्र्याच रोग हो। प्रवेश गर्दछ।
बिरालाहरूमा डायफ्रामाटिक हर्निया: निदान र उपचार
डायाफ्रामेटिक हर्निया एक धेरै गम्भीर समस्या हो जसले तपाईंको बिरालोको जीवनलाई जोखिममा पार्न सक्छ। यसको लक्षण र यसको उपचार के हो जान्नुहोस्।
बिरामी माइकोप्लाज्मा: यो के हो र यसलाई कसरी व्यवहार गरिन्छ?
बिचको माइकोप्लाज्मा एक रोग हो जुन बिरालालाई घातक हुन सक्छ यदि यो समयमै उपचार गरीएन भने। प्रविष्ट गर्नुहोस् र पत्ता लगाउनुहोस् यसको के लक्षणहरू छन्।
बिरालाहरूमा गम्भीर रोगहरू
के तपाईंले भर्खरै बिखारेको कोठा अपनाउनुभयो र बिरालामा भएका गम्भीर रोगहरू के हुन् भनेर जान्न चाहनुहुन्छ? यदि हो भने, आउनुहोस् र हामी उनीहरूलाई कसरी व्यवहार गर्ने भनेर हामी तपाईंलाई पनि बताउँछौं।
बिरालाहरुमा हाइपरस्थेसिया: यो के हो?
के तपाईंको बिरालोले चाँडो र यसको पछाडि र / वा यसको पुच्छर जुनूनी आयो? यदि हो भने, तपाईं hyperesthesia हुन सक्छ। यो के हो र यसलाई कसरी व्यवहार गरिन्छ फेला पार्नुहोस्।
हामी तपाईंलाई बिरालोको बच्चाका रोगहरू के भन्छौं, ताकि तपाईं सावधान / कुनै साना लक्षणहरू जुन तपाईंको सानो साथीले प्रस्तुत गर्दछ, र तपाईं उसलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ।
Distemper बिरालाहरु लाई कसरी असर गर्छ?
बिरालाहरूमा डिसटेम्पेर बिरामीहरू बीचको अत्यन्त संक्रामक रोग हो जुन तिनीहरूलाई घातक हुन सक्छ। यसले उनीहरूलाई कसरी असर गर्छ र कसरी यसलाई व्यवहार गरिन्छ पत्ता लगाउन प्रविष्ट गर्नुहोस्।
किन मेरो बिरालो बालुवामा आफूलाई राहत छैन?
यदि तपाईंको बिरालोले उसको बाथरूम प्रयोग गर्दैन भने, तपाईंले उसलाई ध्यान दिनु पर्छ, किनभने उसलाई समस्या हुन सक्छ। मेरो बिरालोले बालुवामा आफैंलाई राहत नदिने कुरा पत्ता लगाउनुहोस्।
बिरालालाई ज्वरो हुँदा के गर्ने
हाम्रो बिरालो कहिलेकाँही नाजुक क्षणहरू बाट जान्छ। बिरालोलाई ज्वरो आएको छ भने के गर्ने पत्ता लगाउनुहोस् ताकि यो सकेसम्म चाँडो निको हुनेछ।
मेरो बिरालोले स्नट गर्यो, के गलत छ?
किन मेरो बिरालोले डुब्यो? यस लेखमा हामी तपाईको शंका समाधान गर्दछौं ताकि तपाईको साथीले सकेसम्म चाँडो निको हुन सक्छ।
मेरो बिरालो कब्ज भएको छ भने म के गर्ने
के तपाईको फेरीमा गाह्रो समय छ? के तपाईसँग बान्ता छ, भूक हानी छ, र तपाईको कचौरा बक्स प्रयोग समस्या छ? मेरो बिराला कब्ज छ भने के गर्ने पत्ता लगाउन प्रविष्ट गर्नुहोस्।
मेरो बिरालो छींक, किन?
के तपाईलाई श suspect्का छ कि तपाइँको साथी ठीक छैन? के तपाईं मेरो बिराला सुच्छुँ भनेर चिन्ता गर्दै हुनुहुन्छ? प्रविष्ट गर्नुहोस् र हामी तपाईंलाई यसको सम्भावित कारणहरू र उपचार बताउनेछौं।
किन मेरो किट्टीमा पखाला लाग्छ
के तपाईं मेरो किट्टीमा पखाला पखाला भइरहेको छ भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ? यो एक लक्षण हो जुन धेरै गम्भीर हुन सक्छ। प्रविष्ट गर्नुहोस् र हामी तपाईंलाई सम्भावित कारणहरू र उनीहरूका समाधानहरू बताउँदछौं।
किन मेरो बिरालोको दुर्गन्ध आउँछ?
के तपाईंको फ्युरी कुकुरले केही समयको लागि दुर्गन्ध छोड्दैछ? यो तपाईलाई केहि हुने भएकोको लक्षण हुन सक्छ। के गर्ने जान्न प्रविष्ट गर्नुहोस्।
बिरालाहरुमा Nosebleeds बिरालाहरु मा एक साधारण समस्या हो, विशेष गरी यदि तिनीहरू बाहिर जान्छन्। भित्र आउनुहोस् र हामी तपाईंलाई उनीहरूको नाकबाट किन रगत बग्न सक्छ भनेर बताउँछौं।
बिरालाहरूमा मोतियाबिना: कारण, लक्षण र उपचार
के तपाई आफ्नो प्यारी साथीको आँखा को स्वास्थ्य को बारे मा चिन्तित हुनुहुन्छ? के तिनीहरूमा एउटा सुस्त ठाउँ देखा परेको छ? प्रविष्ट गर्नुहोस् र हामी तपाइँलाई बिरालाहरूमा मोतिबिंदुको बारेमा बताउनेछौं।
किन मेरो बिरालाले प्लास्टिक खान्छ
हामी बिस्तारमा किन वर्णन गर्छौं कि किन मेरो बिरालाले प्लास्टिक खान्छ, एक अप्राकृतिक व्यवहार जुन समस्याहरू रोक्नको लागि चाँडो नै सम्बोधन गर्नु पर्छ।
बिरालाहरूमा हिप डिसप्लासियाका लक्षणहरू के-के हुन्?
बिरालाहरूमा हिप डिसप्लासिया धेरै सामान्य हुँदैन तर यो धेरै पीडादायी हुन्छ जसले तिनीहरूलाई सामान्य जीवन बिताउनबाट रोक्छ। प्रविष्ट गर्नुहोस् र हामी तपाईंलाई यो समस्याको बारेमा सबै कुरा बताउनेछौं।
बिरालाहरूको आँखामा रोगहरू
बिरालो आँखाको सबैभन्दा सामान्य रोग के हो? के तिनीहरूलाई कुनै पनि हिसाबले रोक्न सकिन्छ? प्रविष्ट गर्नुहोस् र हामी तपाईंको सबै शंकाहरूको समाधान गर्नेछौं।
बिरालाहरूमा कब्जको उपचार कसरी गर्ने
के तपाईको साथीले उसको व्यवसाय सही गरी सकेन? के तपाईं अप्ठ्यारो महसुस गर्नुहुन्छ जब तपाईं आफ्नो कचौरा बक्समा जानुहुन्छ? प्रविष्ट गर्नुहोस् र हामी तपाईंलाई बिरालाहरूमा कब्जको उपचार गर्ने तरिका बताउनेछौं।
बिरालाहरुमा Dermatitis: कारण, लक्षण र उपचार
हामी तपाईंलाई बताउँछौं बिरालामा डर्मेटाइटिस के हो, के लक्षणहरू छन् र तपाईंले के गर्नु पर्दछ उनीहरूको छालालाई सदाको लागि स्वस्थ बनाउन। प्रवेश गर्दछ।
बिरालाहरूमा प्राय जसो सामान्य रोगहरू
यी बहुमूल्य जनावरहरूको जीवनभर विभिन्न समस्याहरू हुन सक्छन्। प्रविष्ट गर्नुहोस् र हामी तपाईंलाई बताउनेछौं बिरालाहरूमा सबैभन्दा सामान्य रोगहरू के हुन्।
बिरालाहरूमा गँड्यौलाहरू कसरी जोगाउने?
बिरालाका गँड्यौलाहरूले समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ, जस्तै बान्ता वा पखाला। हामी तपाइँलाई उनीहरूबाट कसरी बच्ने र यदि तपाइँको साथीले पहिल्यै गरिसकेको छ भने तपाइँलाई के गर्ने भनेर बताउँछौं।
बिरालाहरूमा एलर्जीका लक्षणहरू
के तपाईंलाई थाहा छ कि फिलीन्सहरू, हामी जस्तो, एलर्जी हुन सक्छ? प्रविष्ट गर्नुहोस् र हामी तपाइँलाई बिरालाहरूमा एलर्जीका लक्षणहरू के छन्, र कसरी यसको उपचार गर्ने भनेर हामी तपाइँलाई भन्नेछौं।
बिरामी टाइफस: एकदम खतरनाक
फ्लाइन टाइफसको बारेमा सबै जानकारी: यो के हो, के लक्षणहरू, संक्रामक स्रोतहरू र उपचारहरू तपाईंको बिरालालाई फिलीना टाइफसको साथ उपचार गर्न सम्भव स्रोतहरू के हुन्
किन मेरो बिरालोको सास छ?
के तपाईको फेरीमा हेलिटोसिस छ? यो अप्रिय लक्षणले जहिले पनि समस्याहरू लुकाउँछ। भित्र आउनुहोस् र हामी तपाईंलाई बताउँदछौं किन मेरो बिरालोको नराम्रो दुर्गन्ध छ र यसलाई कसरी समाधान गर्ने।
बिरालाहरुमा खोक्रा: कारण र उपचार
बिरालामा खोकीको मुख्य कारणहरू के हुन् र हामी तपाईंलाई यो कष्टकर लक्षण कम गर्न के गर्न सक्छौं भनेर हामी बताउँछौं। प्रवेश गर्दछ।
किन मेरो बिरालो ट्रे बाट बाहिर पेशाब गर्छ?
धेरै जसो बिरालाहरूसँग बाँचिरहेका हामी मध्ये धेरैलाई चिन्ता गर्ने समस्याहरू मध्ये एक हो, र त्यसले अझ जटिल बनाउन सक्छ ...
बिरालाहरूमा मिर्गी: लक्षणहरू र तिनीहरूको हेरचाहमा सल्लाह
बिरालामा मिर्गी एक दुर्लभ, तर धेरै गम्भीर रोग हो। तपाईलाई के लक्षण छ? बिरालोको ख्याल कसरी राख्ने? हामी यहाँ यी सबैको बारेमा कुरा गर्दछौं। प्रवेश गर्दछ।
मेरो बिरालोले धेरै पानी पिउँछ, के यो सामान्य हो?
पानी सबै जीवित चीजहरूका लागि आवश्यक छ, तर यसको अधिक प्राणघातक हुन सक्छ। कसरी जान्ने यदि मेरो बिरालोले धेरै पानी पिउँछ? भित्र आउनुहोस् र हामी तपाईंलाई यो व्याख्या गर्नेछौं।
एटाक्सिया, स्ट्यागर सिन्ड्रोम
बिरालाहरूले जीवनभर बिरामी र रोगहरू लिन सक्छ। एउटा गम्भीर व्यक्ति एटाक्सिया हो, स्ट्यागर सिन्ड्रोम। यसलाई खोज्नुहोस्
बिरालाहरुमा Gingivitis को उपचार गर्ने
यो हाम्रा साथीहरूले पाउन सक्ने प्राय: सामान्य रोगहरू मध्ये एक हो। हामी बिरालाहरूमा जिing्गिभाइटिसको उपचार कसरी गर्ने भनेर वर्णन गर्दछौं ताकि तिनीहरू फेरि खुशी होऊन्।
कसरी भन्न सकिन्छ यदि मेरो बिरालोको आन्द्रीय अवरोध छ
हाम्रो फ्युरी कुकुरहरूले गम्भीर स्वास्थ्य समस्याहरू लिन सक्दछ, त्यसैले हामी कसरी मेरो बिरालाको आन्दु बाधा छ कि छैन भनेर कसरी वर्णन गर्दछौं। प्रवेश गर्दछ।
कसरी जान्ने यदि मेरो बिरालोलाई ल्युकेमिया छ
यो एक धेरै खतरनाक रोग हो जसले जनावरको रक्षा प्रणालीमा हमला गर्दछ। हामी तपाईंलाई बताउँदछौं कि कसरी मेरो बिरालालाई ल्यूकेमिया छ कि भनेर जान्नुहोस् ताकि तपाईं उसलाई मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ।
कसरी थाहा पाउने मेरो बिरालालाई ओटिटिस छ कि छैन भनेर
हाम्रो बिरालोलाई ओटिटिस छ कि छैन भनेर कसरी हामी जान्न सक्छौं, कानको पर्खालको जलन जसले धेरै असुविधा र खुजली गर्न सक्छ। उसलाई सुधार गर्न सहयोग गर्नुहोस्।
निलो आँखा र बहिरापन संग सेतो बिरालाहरू
के यो सत्य हो कि सबै निलो आँखा सेता बिरालाहरू बहिरा छन्? तपाईंको बिरालो बहिरा छ कि छैन भनेर कसरी पत्ता लगाउने र यसको कसरी हेरविचार गर्ने भनेर जान्नुहोस् जसले गर्दा यसले आनन्दित जीवन पाउँदछ।
जलेको अवस्थामा के गर्ने
बिरालाहरू यति चाखलाग्दो छन् कि थोरैमा पनि जल्न सजिलो छ। तपाइँको बिरालो जलाइएको छ भने के गर्ने सिक्नुहोस्।
कसरी थाहा पाउने मेरो बिरालालाई एड्स छ कि छैन भनेर
त्यहाँ धेरै रोगहरू छन् जसले हाम्रो बिरालाहरूलाई असर गर्न सक्छ, तिनीहरूको जीवन जोखिममा राखेर। हाम्रो बिरालालाई एड्स छ कि छैन भनेर कसरी जान्ने र हामी यसको उपचार कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामी तपाईंलाई बताउँछौं।
के गर्ने यदि मेरो बिरालो लंप्स भयो
के गर्ने यदि मेरो बिरालो लंप्स भयो? सुझावहरूमा नोट लिनुहोस् कसरी जान्न को लागी यी केसहरु मा काम गर्ने जहाँ जनावरले पीडा महसुस गर्दछ। तिमी किन ल l्गडो छौ?
बिरालाहरूमा सबैभन्दा सामान्य संक्रामक रोगहरू के हुन्
के तपाई जान्न चाहानुहुन्छ बिरालाहरुमा सबैभन्दा धेरै संक्रामक रोगहरू र उनीहरुकै धेरै जसो लक्षणहरु भेटिन्छ? भित्र आउनुहोस् र पत्ता लगाउनुहोस्।
हामी सबैलाई थाहा छ कि बिरालाहरूले एलर्जी निम्त्याउन सक्छन, तर के तपाईंलाई थाहा छ तिनीहरू पनि असर गर्न सक्छन्। बिरालामा एलर्जीहरू के जस्तो छन् भनेर फेला पार्नुहोस्।
कसरी जान्ने यदि मेरो बिरालोमा पार्भाभाइरस छ
यो बिराला मालिकहरूले सबैभन्दा डरलाग्दो रोग मध्ये एक हो तर यसलाई कसरी पत्ता लगाउने? हामी जान्दछौं कि कसरी थाहा पाउने यदि मेरो बिरालोमा पार्भाभाइरस छ।
बिरालाहरूमा कसरी उड्न सकिन्छ? एउटा फ्लाई भनेको के हो पत्ता लगाउनुहोस्, कसरी यसलाई हटाउने र यहाँ धेरै। कोही पनि आफ्नो प्यारो असहज महसुस भएको चाहँदैनन्।
त्यहाँ बिल्कुलै धेरै कारणहरू छन् किन कि एक बिचमा धेरै लार हुन सक्छ। यदि तपाइँ किन मेरो बिरालो धेरै drools सोच्नुहुन्छ भने, हामी यहाँ तिनीहरू सबै वर्णन गर्नेछौं।
क्यान्सरले बिरालाहरूलाई पनि असर गर्छ
क्यान्सरले लाखौं बिरालाहरूलाई पनि प्रभाव पार्दछ, यद्यपि यसको कारणहरू निर्धारण गर्न गाह्रो छ र बिरालाहरूले जुनसुकै उमेरका भए पनि यसलाई भोग्न सक्छ।
मेरो बिरालामा रेबीज छ कि छैन कसरी जान्ने
यो स्तनपायीहरूले पाउने सबैभन्दा खतरनाक रोगहरूमध्ये एक हो। प्रविष्ट गर्नुहोस् र तपाईं कसरी पत्ता लगाउनु हुन्छ कि मेरो बिरालोमा रेबीज छ कि छैन, र कसरी यसलाई रोक्न सकिन्छ।
कसरी घर बनाउने एलिजाबेथन हार बनाउन?
यदि तपाइँको बिरालोले एलिजाबेथन कोलोर लगाउन आवश्यक छ भने हामी तपाइँलाई कसरी घर बनाउने र कसरी तपाईको बिरालोले यसलाई पछि नहटाउने बनाउनको लागि सिकाउने छ।
बिरालो चिसोको उपचार गर्ने उपचार
यदि तपाईंको बिरालामा छींक लाग्छ र बलगम छ भने उसलाई चिसो हुन सक्छ। हामी तपाईंलाई बिरालाहरूमा चिसो पर्ने उपचार कसरी गर्ने, उपचार कति लामो हुन्छ र कसरी यसको रोकथाम गर्ने भनेर हामी तपाईंलाई बताउँछौं।
कान संक्रमण र बिरालाहरूलाई सहयोग गर्ने उपचार
के तपाईंको बिरालामा ओटाइटिस छ? बिरालाहरूमा कान संक्रमणका लक्षणहरू, कारणहरू र उपचार पत्ता लगाउनुहोस्, एक रोग जुन हामी तपाईंलाई कसरी रोक्ने भनेर देखाउछौं।
उपचार र कन्जेक्टिवाइटिस रोक्नको लागि सुझावहरू
के तपाईंको बिरालामा नेत्रश्लेष्मलाइटिस वा आँखाको समस्या छ? तपाईंको रोगको कारण र यसको सही उपचार कसरी गर्ने भनेर फेला पार्नुहोस् ताकि यो छिट्टै निको हुनेछ।
बिरालोको आँखा कसरी सफा गर्ने
तपाईंको बिरालोको आँखा राम्रोसँग सफा गर्न सिक्नुहोस्। यदि तपाईंको बिरालामा नेत्रश्लेष्मलाशोइटिस, उसको आँखामा माटो छ, हामी तपाईंलाई राम्रोसँग तिनीहरूको देखभाल गर्न सिकाउँछौं।
मेरो बिराला गर्भवती र रक्तस्राव हो
बिराला गर्भवती हुँदा ठूलो चिन्ता मध्ये एउटा हो कि त्यसले समस्यामा पर्ने समस्या हुन सक्छ ...
यदि मेरो बिरालोले करायो भने म के गर्ने?
आँखा बिरालाहरूका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ, त्यसैले मेरो बिराला रोएको खण्डमा के गर्ने भनेर जान्नु महत्त्वपूर्ण छ। पत्ता लगाउनू,
बिराला म्याज मानवमा संक्रामक छ
के तपाईंको बिरालामा खुजली छ? त्यस्तो अवस्थामा तपाईले अत्यन्त सावधानी अपनाउनु पर्दछ यसलाई हिर्काउनबाट जोगिन। हामी तपाईंलाई यो रोगको लक्षण र उपचार बताउँछौं।
कसरी थाहा पाउने मेरो बिरालामा परजीवी छ भने
आंतको परजीवीहरूले हाम्रो साथीको लागि महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्छ। प्रविष्ट गर्नुहोस् र हामी तपाइँलाई कसरी थाहा पाउने थाहा पाउन सक्दछौं यदि मेरो बिरालोमा परजीवी छ भने।
कसरी जान्ने यदि मेरो बिरालोलाई toxoplasmosis छ
यो संक्रामक रोगहरू मध्ये एक हो जसले बिरालाहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा सबैभन्दा बढी क्षति पुर्‍याएको छ। हाम्रो बिरालालाई टोक्सोप्लाज्मोसिस छ कि भनेर कसरी जान्ने भनेर हामी व्याख्या गर्दछौं।
बिरालाहरूमा पखालो संक्रमणको उपचार कसरी गर्ने
यदि तपाईले देख्नुभयो कि तपाईको फ्युरी कुकुरले प्राय: उसको लिटर बक्समा जान्छ भने तिमीले उसलाई पशु चिकित्सकमा लैजानु पर्छ। बिरालाहरूमा पखालो संक्रमणको उपचार गर्ने तरिका सिक्न प्रविष्ट गर्नुहोस्।
कसरी मेरो बिरालो अन्धा छ भनेर जान्न
यो एक समस्या हो जुन हाम्रो रौंलाई असर गर्न सक्छ, विशेष गरी उमेरका कारण। प्रविष्ट गर्नुहोस् र तपाईं कसरी पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ कि कसरी मेरो बिरालो अन्धा छ भनेर।
बिचको कन्जाक्टिवाइटिसको बारेमा सबै
बिचको नेत्रश्लेष्मलाशोथ एक समस्या हो जुन लक्षण वा रोग आफै हुन सक्छ। हामी यस लेखमा उनको बारेमा सबै बताउँछौं।
बिरालालाई तरल औषधि कसरी दिने
यद्यपि यो सजिलो लाग्न सक्छ, केहि अवसरहरूमा र बिभिन्न कारणहरूले तपाईंको पाल्तु जनावरलाई पानी दिन जटिल हुन सक्छ।
ओटिटिसको साथ कानहरूको सफा र कीटाणुशोधन
पुरानो किडनी असफलताको साथ बिरालाहरूको लागि आहार
बिरालाहरूमा स्नायु सम्बन्धी समस्याहरू
बिरालाहरूमा गुदा थैली समस्याहरू
बिराला स्वास्थ्य समस्याहरू र तिनीहरूलाई कसरी पत्ता लगाउने
बिरालाहरूले उनीहरूको शरीरको बिभिन्न भागहरूमा रोगहरूको लामो श्रृंखला भोग्न सक्दछ, त्यसैले मालिकहरूले समयको लागि पेशेवरमा जानका लागि मुख्य लक्षणहरू चिन्न सिक्नु आवश्यक छ।
तपाईको बिरालाको लक्षण जब यो ठीक छैन
यो धेरै दुर्लभ छ कि हाम्रो बिरालो जल्यो, हामी जान्दछौं कि यो एकदम जिज्ञासु छ कि यो अचम्मलाग्दो छ कि यसलाई जलाउने खतरामा पर्दछ।
गर्भवती महिलाहरूमा बिरालो स्क्र्याच
बिरालो स्क्र्याच एक बिमारी हो जुन मानिसमा फिलीन्सले सार्छ जुन गर्भवती बच्चाहरूको अवस्थामा गम्भीर हुन सक्छ।
बिरामी एक्जिमाको उपचार र रोक्नको लागि सल्लाहहरू
के मेरो बिरालाले मूत्र संक्रमणबाट ग्रस्त छ?
हाम्रो बिरालाहरूको अन्तःस्रावी प्रणाली
बिरालाहरूमा छाला संक्रमणको लागि प्राकृतिक उपचार
के मेरो बिराला पेटको अल्सरबाट पीडित छ?
हाम्रो बिरालाहरूको छालामा Fungi: Dermatomycosis